ကိုကို့ကို ယူလိုက်မှာပေါ့ – Grab Love Story
မေဇင်ဟာလှတယ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့ မိန်းမတယောက်ပါ။ သူမရဲ့ နုညံ့တဲ့ အသားအရေနဲ့ မစိုစလောက် အနည်းငယ်ဝနေတယ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့ခန္ဓာကိုအလှပိုင်ရှင်မိန်းမတယောက်ပေါ့..။ ၁၅ပေါင်ခန့် ဝိတ်ချထားပြီးဘော်လ်ဒီကိုပြန်ထိန်းထားတာ မကြာသေးပါဘူး ။ မေဇင်တယောက် အတော်လေးကြိုးစားလိုက်ရတာပေါ့ မိန်းမတစ်ယောက် အတွက် ဝိတ် ၁ပေါင်ချဖို့ဆိုတာ တကယ်ကိုမလွဲတဲ့ ကိစ္စပဲလေ… ယောကျာ်းလုပ်သူ ကိုအောင်မင်းကတော့ မေဇင့်ကို လိုက်လို့ မယှဉ်နိုင်တော့ဘူး …
အရမ်းဝလာတော့ ဘယ်လောက်လုပ်လုပ် သိပ်မထိရောက်သလို ဖြစ်နေရော …ကိုအောင်မင်းဆိုတဲ့လူက အစားအသောက်ကလဲ ကျူးတာကို … ပေါင်၂၀၀လောက် ခန္ဓာကို အလေးချိန်ရှိတဲ့ တကယ် ဝက်ကြီးပါ… ဒါပေမဲ့ မေဇင် ကိုအောင်မင်းကို ချစ်နေဆပဲါ… ကိုအောင်မင်းကလဲ မေဇင့်ကို ချစ်နေဆဲပါပဲ..တယောက်ကိုယောက်တော့ သစ္စာလုံးဝ မပျက်ဖူးသေးတဲ့ တကယ်သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက်ပေါ့…. အားကစားပုံမှန်လုပ်တဲ့ မမေဇင်ကတော့တနေ့တခြား သွေးသားလည်ပတ်မှုတွေကောင်း…
နေလို့ထိုင်လို့ကောင်း နဲ့ မိမိကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုတွေရှိပြီး ကို့ကိုအပျိုလေးတယောက်လို သွက်လက်မှုတွေ ခံစားလာရတဲ့အချိန်တွေမှာ …ကိုအောင်မင်းတစ်ယောက် အတွက်တော့ ပိုဝသထက်ဝပြီး အလုပ်တဖက် နဲ့ ငွေနောက်ပဲလိုက်နေတော့ ဖိအားတွေများလာတယ်…. … နောက်အရေးကြီးဆုံးတခုက သူ့ဇနီးချောလေးအပေါ် လိင်ကိစ္စမှာ ဆန္ဒပြည့်ဝအောင် မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အတက်ွသူ့ကိုသူ နောင်တလရဲ နေလေရဲ့..ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်လေး ကိုအောင်မင်းခမျာ သူ့ကိုသူတောင်အနိုင်နိုင်ပါ …
စဉ်းစားကြည့်ပါ မိန်းမဆိုတာမျိုးကလဲ လင်ယောကျာ်းလုပ်တဲ့ လူကို ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် ဒီလို လိင်မှုကိစ္စမှာ ဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ ယောကျာ်းတယောက်ကို ဘယ်အတိုင်းအတာထိစိတ်ရှည် ပေးနိုင်မလဲ ဆိုတာကိုပါ..မေဇင်ခမျာ လိုနေတဲ့ ဆန္ဒမီးကြီးကို မငြိမ်းသတ်နိုင်ဖြစ်ပြီး အရမ်းကို စိတ်ဒုက္ခတွေ ရောက်နေရှာတော့တယ်။ ဒါကလဲ မေဇင့်လို မိန်းမတယောက်ထဲ မဟုတ်ပါဘူး …အခုခေတ် စီးပွားရေးဆိုတာကလဲ ကိုမှအပြိုင် မကျဲနိုင်လျင် အမြတ်အစွန်းဆိုတာကို့အတွက် ကျန်ဖို့မ မရှိတာ …
လူတိုင် ဒီလိုပဲ ငွေနောက်ကို လိုက်နေရတာဘဲ..မလိုက်နိုင်ရင်တော့ ဒီလိုခေတ်ကြီးထဲ အစစအရာရာ ပြည့်စုံတယ်လို့ ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလေ..။လူတွေက ရောင့်ရဲတင့်တိမ်နိုင်ခြင်းကို မရှိတော့ပါဘူး …ကိုအပါအဝင်ပေါ့…ဟီဟီ ဒါပေမဲ့ မိသားစုအတက်ွလဲ အချိန်တော့ ပေးကျရမယ်လေး။ ဒီလိုနဲ့အတူတူနေလာတာနှစ်တွေလဲကြာပါပြီ….ကိုအောင်မင်းဟာ ကုမ္မဏီပိုင်သူဌေးပါ တနေ့လုံး ကုမ္မဏီရုံးခန်းထဲထိုင်ပြီး ညနေ မှအိမ်ကိုပြန်ပါတယ်….မမေဇင် ကတော့ သူမသူငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့၅နှစ်အရယ်ွကလေးငယ်တဦးကိုထိန်းပြီး အိမ်မှာပဲလုပ်စရာရှိသည်များကို လုပ်ရင်းနေ့ရက်တေကွို ဖြတ်တန်းနေတ့သဲူပါ
…နောက်ပြီး စာရေးဆရာမ တယောက်ဖြစ်ဖို့ လဲ အိမ်မက်ထားသူပေါ့…ကစ်ကစ်ကို သူ့သားလေးတယောက်လိုပြုစုလို့ …ကစ်ကစ်အိပ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာ စာအုပ်ဖတ်..ခွေထိုင်ကြည့်..ကလေးကို သူ့အဖေ အရင်းကယူထားတဲ့….. အချိန်တွေဆိုရင်တော့..ရှော့ပင်ထွက်..အလှပြင်ဆိုင်သွား..ဒါတွေလုပ်ရင်းနဲ့ပဲ ကိုအောင်မင်းက သူ့မိန်းမကို လိုလေသင်းမရှိအောင်ထားတာပေါ့။ သူများကလေးကို ထိန်းပေးရတာကလဲ မေဇင်အတွက်ပြသနာမဟုတ်ပါဘူး…ဘာလို့ဆို မေဇင်တို့ လင်မယား ကလေးမရဘူးလေ မေဇင်ပဲ လိုတာလား ကိုအောင်မင်းပဲ ချွတ်ရွှန်းနေတာလာ မပြောတတ်…
ဒါပေမဲ့လင်မယားသက်တန်း ၅နှစ်၆နှစ်အတငွ်း မေဇင် ကိုဝန်လုံးဝမရခ့ဖဲူးဘူး…ကစ်ကစ်လေးကလဲ တခြားသူကလေးတော့ မဟတ်ုပါဘူး သူငယ်ငယ်ကနေ တက္ကသလိုရောက်တ့အဲ ထိ ဘော်ဘော်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သလို အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း လြဲဖစ်တဲ့ တင်ထွေးငယ်ရ့ကဲ လေးပါ။ တင်ထွေးငယ်ဟာ ဒီကလေးမွေးပြီး၂နှစ်လောက်ပဲရှိအုံးမယ် ရင်သားကင်ဆာနဲ့ ဆုံးပါးသွားရှာတယ်။ ကစ်ကစ်ကို သူတို့လင်မယားမွေးစားဖို့ ဖအေဖြစ်သူ ကိုငြိမ်းဝင်းကို ပြောကြည့်ဖူးပါတယ်…ဒါမေမဲ့ကို ငြိမ်းဝင်းလုံးဝ လက်မခံပါဘူး။
ဒီကလေးမှာ တင်ထွေးငယ်ရဲ့ အငေ့အွ သက်တွေအများကြီးပါနေတယ်တော့ကာ …ကျွန်တော့ကလေးကို အမွေစားအမွေခံ အပိုင်မွေးစားခိုင်းဖို့ဆိုတာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အဖြေကို ပဲသူတို့ရပါတယ် ။ ဒါကလဲဟုတ်တယ် ကစ်ကစ်ရ့မျဲက်နှာပေါက် အသားအရေဟာ မတင်ထွေးငယ်နဲ့ တထေရာထဲရယ် …ကိုငြိမ်းဝင်းဆိုတဲ့လူက မိန်းမကိုအလန်ွချစ်တတ်တ့လဲူပါ။ ပြောတာပြောတာပါ ဒီကလေးက မမေဇင်တို့အိမ်မှာပဲ ၁၂လလုံး နေ့တိုင် အမြရှဲိနေတာပ…ဲ ကလေးအဖေဖြစ်တဲ့ ကိုငြိမ်းဝင်း တယောက် တင်ထွေးကြည်ဆုံးသွားကတဲ့က အရက်တွေအလွန်အကျွံသောက်ပြီး အရက်သမားလုံးလုံးဖြစ်လို့နေလေရဲ့ ။
မိန်းမကို အလွန်ချစ်တဲ့ လူဆိုတော့လဲ တသက်လုံးဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီဆိုတဲ့ အသိကြီးကို ကိုငြိမ်းဝင်တယောက် မခံစားနိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒီလိုတွေဖြစ်တာ အတော်ကြာသွားတော့ ..ကို့ကိုယ်ကို ပြန်အရောင်တင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကို စဉ်းစာမိသွားခ့တဲ ယ် ..လူကောင်းပြန်ဖြစ်ချင်လာတာကလဲ သူ့သမီးလေးကစ်ကစ်ကြောင့်လို့ ပြောရမှာပဲ။ ဟုတ်တယ်လေး သူ့မှာ သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိသေးတဲ့ဟာ… သူမကို ပြုစုပျိုးထောင်ရမယ်..လူအများကြားမှာ ကို့သမီးလူရာဝင် အဆင့်အတန်းရှိအောင် ထားဖို့ဆိုရင် ဒီပုံဆံနဲ့ သူ့သမီးကိုအများက့ရဲ့မှာပေါ့။
သူ့ဒီလိုစိတျဓာတျကပြုံမြိုးနဲ့ ..ဘယျလလိုပျဒါတှလေုပျနိုငျမလဲ။ ကိုငွိမျးဝငျ အရကျအလှနျအကြှံသောကျပွီး ပတေနေလေို့ သူ့စီးပှားရေးကိုတော့ မထိခိုကျခဲ့ပါဘူး။ ကိုငွိမျးဝငျဟာ အတျောလေးခမျြးသာတဲ့မိသားစုမှ ပေါကျဖှားလာတဲ့ သူဌေးသားပေါ့ ။ သူဒီလို့ အခြိနျတှအေမြားကွီးကို အရကျနဲ့ အခြိနျကုနျနခေ့ေဲ ပမဲ့ သူ့ရဲ့ ကွယျှဝမှုကတော့ အပြိုရတေောငျမပကျြဘူးပေါ့လေ… နောငျတရခြိနျစောတယျလို့ပွောရမှာပဲ ကိုငွိမျးဝငျး သူ့ကိုသူပွုပွငျနိငျခဲ့ပါတယျ။ မဇေငျတို့လငျမယားကလဲ အမွဲလို ဆုံးမ တိုကျတှနျးနတေော့ …အကောငျးပွနျဖွဈအောငျ လုပျရတော့တာပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ မေဇင်နဲ့ ကိုငြိမ်းဝင်းတို့ ကြားမှာ ဘာမှမရှိပါဘူး …တယောက်အတွင်းကိစ္စ တယောက်သိဆိုတော့ …တဦးပေါ်တဦးလဲ နားလမှဲုတေအွ လန်ွရှိတဲ့မိတ်ဆေအွ ဆင့် ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ တယောက်သောသူကတော့……။ ကိုအောင်မင်းတယောက်ကတော့ တနေ့ထက်တနေ့ သူ့အိမ်နဲ့ အလှန်းဝေးလို့လာပါတယ်။ ကုမ္မဏီကိစ္စနဲ့ခရီးတွေဆက်တိုက်ဆိုသလို ထွက်ရတော့တာပဲ ။ တည… ညလယ်ယံကြီးမှာ မေဇင် တယောက်အိမ်မက်မက်နေရင်းက ရုတ်တရက် ငေါက်ကနဲထထိုင်နေပါတယ်… ဘေးကြည့်တော့ လင်တော်မောင် ကိုအောင်မင်းတယောက် ဆင်အော်မနိုးကုလားသေ ကုလားမော အိပ်နေလေရ့။ဲ
သူမဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို လင်တော်မောင်တယောက် ဘယလ်ိုမှသိနိုင်မယ်မထင်ဘူး… ဒေါသကလဲထွက် ရမ္မက်စိတ်တွေကလဲပူလောင်နဲ့ တိတ်ဆိတ်တဲ့ ညနက်ကြီးထဲမှာ အသက်ရှူနှုန်းတွေ ကလတဲ ဖြည်းဖြည်းနြဲ့မန်လာလို့ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ မေဇင့်အဖြစ်ကို တလောကလုံးက သိဖို့နေနေသာသာ ဘေးမှာအိပ်နေတဲ့ လင်ယေကျာ်းကတောင်မသိရှာဘူး။ ဒါကို မေဇင် ဝမ်းလဲဝမ်းနည်း ကို့အဖြစ်ကိုလဲသနား နှာမှတ်သံက တရှူရှူနဲ့သနားစရာ သတ္တဝါမလေးကိုဖြစ်လို့… လင်တော်မောင်ကို နိုးလို့ မေဇင့်ကိုလုပ်ပါအုံးကိုရယ်လို့ ပြောရအောင်ကလဲမဟုတ်သေး…
ဒါနဲ့ ကို့ဟာကိုယ်ပဲပြီးအောင် လုပ်မယ်ဆိုပြီး စိတ်ဆုံးဖြတ်ကား အိပ်ယာပေါ်ပြန်လဲချလိုက်ပါတယ်…လက်တဖက်ကို ညဝတ်အိင်္ကျီအပါးလေးသာဖုံးထားတဲ့ ညာဖက်နို့အုံလေးကို ဖွဖွညစ်ရင်း …ညဝတ်စကပ်ပါးလေးအောက်က ရမ္မက် အရှိန်ကြောင့် ချော်ဆီ အရည်ကြည်လေးတွေထွက်ပြီး စိုစွတ်လို့နေတဲ့ အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးရှိရာကို ကျန်လက်တဖက်က နိုက်ထည့်ပြီး အပေါ်အောက်ဘယ်ညာ ဖြည်းဖြည်းလေးဆွဲပွတ်လိုက် အရမ်းဖိပြီးပွတ်လိုက်နဲ့ …တချိန် ကိုအောင်မင်းစွမ်းခ့ချဲိန်က ယုယမှုတေကွို အရုံပြုလို့ ကာမဆန္ဒရဲ့ လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ကို တယောက်ထဲ ကြိုးစားလို့ ချီတက်နေရှာတော့တယ်..။
“ အင်း…အင်း ဆိုတဲ့ အသံတဲတဲလေးကိုတော့ သူကိုတိုင်ကလွဲပြီး ဘယ်သူမှကြားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး….အလွန်ညင်သာပြီး ဖြည်းညင်းတဲ့ စီးချက်တွေနဲ့ သူမတစ်ယောက်ထဲ ကြိုးးစာလို့ ..ဖြေသိပ်နေရရှာတာပါ။ “ အင်း….အင်း….ဟင့်…အင်းးးးးး……..” ဆိုပြီး အသံ ဗော်လွန်း လေးတဖြည်းဖြည်းတက်လာပြီး အင်းးးးးးးး….ဆိုတဲ့ သံဆွဲလေး နဲ့ ရုတ်တရက် မေဇင်တယောက် ငြိမ်ကျသွားတော့တယ်…။ သူမပြီးသွားပါပြီ အိမ်ထောင်သည် မိန်းမသားတယောက်အဖို့ လင်တော်မောင်ဘေးနားမှာရှိလျက်နဲ့မှန်းပြီး စိတ်ကူးနဲ့ ဖြေသိမ့်လိုက်ရတဲ့ သူမရဲ့ ဖြေသိမ့်မှုဟာ ဘယ်လောက်ထိ ပြည့်ဆုံချင်းရှိမှာသတ့လဲ ။ဲ
ဒီလိုန့မဲ နက် မိုးလင်းလို့ တခါအလင်းရောက်ခြဲပန်ပါပြီ … မေဇင့် မျက်လုံးလေးတွေမှိတ်လျက်နဲ့ ကိုအောင်မင်းကို လှန်းဖက်လိုက်ပါတယ်။ ဘာမှမရှိပါဘူး ကိုအောင်မင်းအိပ်တဲ့ဖက်ခြမ်းက စောင်လေးကိုပဲသွားကိုင်မိလိုက်ပါတယ်… ကိုအောင်မင်း ထသွားပါပြီ..ဒါနဲ့ မျက်လုံးလေးဖွင့်လို ခေါင်းရင်းက စာကြည့်စာပွကဲ ကိုအောင်မင်း ထာခ့တဲ့စာတိုလေးကို လှန်းယူပြီး ဖတ်ကြည်လိုက်တယ်…“မေ ကိုဒီနေ့ မန္တလေးကိုသွားလိုက်ပြီ..မနက်ဖြန်ပြန်လာမယ်…ချစ်တဲ့ ကိုအောင်” ကိုအောင်မင်း တယောက်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ မန်းလေးကို သွားပါပြီ ။
ထူးခြားမှုမရှိတဲ့ နေ့တနေ့ကို ထပ်ပြီးဖြတ်တန်းရအုံးမှာပဲ ဆိုတဲ့ အတွေးလေးတွေးရင် ပြန်မေးဆက်ဖို့ မျက်လုံးတွေပြန်မှိတ်ပြီး ခဏမှာပဲ…. စာကြည်စာပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့ သူမဖုန်းလေး တုံခါလာတော့တယ်…. သီချင်သံတွေ အဆက်မပြတ် ထွက်ပေါ်လို့ပေါ့။ ဒါနဲ့ ဖုန်းကိုကောက်ယူပြီး ကြည့်လိုက်တော့ ကိုငြိမ်းဝင်းစီကဖုန်းလေးဝင်နေတာပါ။ ကစ်ကစ်လေးကို မမေဇင်စီလာထားဖို့ ဖုန်းလှန်းဆက်တယ်စိုတာ မေဇင်သိလိုက်ပါပြီ.. “ မောနင်း ..ကိုငြိမ်း…ကလေးလာထားတော့မလို့လာ” “ဟုတ်တယ် မေဇင် …ကလေးက အခုအိပ်ပျော်နေသေးတယ်သိလာ….
အဲဒါအကိုချီလာလိုက်မယ်… မေဇင်ကော နိုးသေးရ့လဲာ..အနောက်ရှက်များ ဖြစ်သွားလား..မသိဘူးမေဇင်ရေ…” “ အို့….မဖြစ်ပါဘူး ကိုငြိမ်းရယ် မေဇင်ထနေပါပြီ ..ခေါ်လာခဲ့လိုက်ပါ” “ဒါဆို ကိုလာပြီနော် ..မေဇင်” ကိုငြိမ်းဝင်း ကတော့ မေဇင်နဲ့ စကားပြောရင်းအမြဲ ရွှင်ရွှင်ပျပျ မြူးမြူးကြွကြွပဲပြန်ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါနဲ့ မေဇင်လဲ အိပ်ရာပေါ်က အလူးအလထဲ ညဝတ်အိင်္ကျီနဲ့ ဆကပ်တိုကို ကွင်းလုံးပုံချွတ်လို့ ကိုလုံးတီန့ဘဲာဝတ်ရမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားရင်း အဝတ် ဗီရိုကို မွေနေပါတော့တယ်။
ဆကပျတို အိင်ျကြီပါးန့ေဲ တာ့ ကိုငွိမျးဝငျးကို ထှကျတှေ့ဖို့မဖွဈနိုငျ ဒါကွောငျ့ ညဝတျ ပဂြားမတျဈ အပျေါအောကျစငျတူကောကျဝတျလိုကျပါရော… မကွာဘူး အိမျရှေ့ ဘဲလျတီးသံကွားလို့ အိမျအောကျအပွေးစငျးပွီး တံခါးဆှဲဖှငျ့ လိုကျတော့ …ကိုငွိမျးဝငျးနဲ့ သူ့လကျပျေါအိပျပြျောနတေဲ့ ကဈကဈတို့ရောကျနကေပြါပွီ။ကိုငွိမျးဝငျနဲ့ ကဈကဈကိုပွုံးပွလို့ နှုတျဆကျကွိုနရေငျးက မဇေငျတယောကျ ရုတျတရကျဆိုသလို တှတှေကွေီးကွညျ့ပွီး မှငျသကျမိနပေါတယျ။
ဒါကို ကိုငြိမ်းဝင်းက “ မေဇင် ကိုငြိမ်းတို့ ဘာများဖြစ်လို့ လဲ..ဘာများလိုအပ်နေလို့လဲမသိဘူးနော်” ကိုငြိမ်းဝင်လဲမေဇင် သူန့ကဲ လေးကို ဆူးဆိုက်ကြည့်နေတာကို သတိထားမိပြီး …သူတို့ ဘာများလိုအပ်နေသလေဲ ပါ့…မေဇင်တလဲ့ကို့ကိုယက်ိုတလဲ့ ပြန်ကြည့်နေမိတယ်။ ဒါနဲ့ မေဇင် သတိပြန်ဝင်လာပြီး “ အော်…ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကိုငြိမ်း လာလာအိမ်ထဲဝင်” ကလေးကို မေဇင် လက်လွဲယူလိုက်ပြီး …အိပ်ခန်းထဲရှိ ကုလေးပုခက်မှာ သွားသိပ်ထားလိုက်တယ်။ မေဇင်အခန်းထဲဝင်လာတော့ …ကိုငြိမ်းဝင်းဆိုဖာပေါ်ထိုင်နေရင်းကနေ မေဇင်မျက်နှာကိုကြည်ပြီး
“ မေဇင်အခုမှထတာလာ…ဒါမှမဟုတ်နေမကောင်းဘူးလာ” “ နေမကောင်းတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ကိုငြိမ်း …နဲနဲ အားပျော့သလို အားမရှိသလို တမျိုးလေးဖြစ်နေတာ… အဲလိုကြီး အားမရှိတာလဲမဟုတ်ဘူး…ဘယ်လိုပြောရမလဲ…ခစ်ခစ်” ရီရင်းပြန်ဖြေသည် သူမဘာဖြစ်နေသည်ကို…သူမမှလွဲရ်ျ ကိုငြိမ်းဝေ သိနိုင်မယ်မထင်ဘူး…။ဒီလိုနဲ့ နှစ်ယောက်သားပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ..ရီလိုက်ကျပြီး နှစ်ယောက်သား ခေတ္တတိတ်ဆိတ် သွားကျတာပဲ…ကိုငြိမ်း တစ်ယောက် အစော ရွှင်ပျနေသောမျက်နှာမှာ ရုတ်တရက် ညိုးကျသွားပြီး ကြမ်းပျင်ကို ငုံ့ကြည့်နေနေတော့
…မဇေငျ ကိုငွိမျးဝငျ ကိုတခကျြအကဲခကျကာ ဆုပျထားတဲ့ ကိုငွိမျးဝငျးလကျမြားကို သူမ လကျနုနုလေးဖွငျ့ ညငျသာစှာ အုပျကိုငျလိုကျပါတယျ။ “ ကိုငွိမျး မနေ့က ထှေး ငယျဆုံးတာ ၅နှဈပွညျ့တ့ေဲ န့နျော” “ ဟုတျတယျ မဇေငျ” ကိုငွိမျးပွနျဖွသေညျ “ကိုငွိမျးဒီလို လိမျလိမျမာမာနဲ့ ကဈကဈကို ကောငျးကောငျးပွုစုပေးနတေဲ့ အတှကျ ထှေးငယျ ကိုငွိမျးကို တမလှနျကနေ ကြေးဇူးတငျနမှောပါ ကိုငွိမျးရယျ..ဝမျးမနဲပါနဲ့နျော..ကိုငွိမျး” ဟု တိုးတိတျညငျသာသညျ့ လသေံဖွငျ့ကိုငွိမျး၏ သနားဖှယျကောငျးသောမကျြဝနျးအစုံကို မဇေငျဆိုကျကွညျ့ကာ
ကိုငြိမ်း၏လက်များကို သူမလက်နုနုလေးများဖြစ်ဆုပ်ကိုင်ရင်း နှစ်သိမ့်စကားပြောလို့ မေဇင် ကိုငြိမ်းကို အားပေးနေရှာတယ် …။ သူမမျက်ဝန်းများမှလဲ မျက်ရည်ပူများ ပါးပြင်ထက်သို့ စီးလို့ တယောက်ကိုတယောက်သနားခြင်း နာလည်မှုတို့နှင့်အတူ နှစ်ယောက်သား မမြင်ရ မကြားရတဲ့ အပေးအယူတွေ ချိန်ငြိနေသယောင်….. နေ့စဉ်တွေ့နေရသော မေဇင့် အဖြစ်လေးကို ကိုငြိမ်းဝင်းကောင်းကောင်းသိတလို…ကိုငြိမ်းဘယ်လိုတွေ ခံစားနေရလို့ ဘာတွေကိုတောင်းတနေသလဲဆိုတာကိုလဲ ကိုငြိမ်း၏ဘဝအစအဆုံးကို သိသော မေဇင်ကလဲ ကောင်းကောင်းသိတယ်….
ဒါကြောင့် အခုလို စိတ်ကွယ်ရာမှာ နားလဲမှုတွေ အပြန်အလှန်ပေးနေတဲ့ ဖိုမနှစ်ဦး တို့ရဲ့ နောက်ဆုံးဘူတာဟာဘယ်မှာဆိုက်မလဲလို့ ထင်လဲ။ ဒါကိုလဲသူတို့နှစ်ဦး သိပြီးသားပဲလေ… တွေးကြည့်စရာမလိုတော့ပါဘူး…ဟုတ်တယ်မလား ။ ကိုငြိမ်းလဲ မေဇင်ကိုင်ထားသော သူ့လက်ဖွားနှစ်ဖက်ကို လွှတ်ပြီး မေဇင့် လက်လေးများအပေါ်မှ ဖြည်းဖြည်းအုပ်ကိုင်လို့ မေဇင်မျက်နှာနားသို့ သူ့မျက်နှာကို တိုးကပ်သွားလိုက်ပြီး…အနည်ငယ် တုန်ရီနေသောလေသံဖြင့် ကိုငြိမ်းဝင်း .. “ကိုငြိမ်းရင်ထဲကစကားတခုလောက်ပြောပါရစေမေဇင်
ကိုအောငျမငျးက မဇေငျ့ကို ဂရုစိုကျရဲ့လား..ဟငျ… မဇေငျဘာတှလေိုအပျနတောလဲဆိုတာ ကိုငွိမျးကောငျးကောငျးသိပါတယျ မဇေငျရယျ…သူမဖွညျ့စီးနိုငျရငျး ကြှနျတျော အဲဒီတာဝနျလေးကို ယူပါရစေ ..မဇေငျ…နျော…ခှငျ့ပွုပါဗြာ” မဇေငျ ခေါငျးလေးငုတျသှားပွီး “ ဟုတျပါတယျ ကိုငွိမျးရယျ….ကိုအောငျမငျးကလေ အခုဆိုရငျ မဇေငျ့ကို ရှိသေးတယျလို့တောငျ ထငျသေးရ့လဲားမသိဘူး…အခြိနျပွညျ့ ကုမ်မဏီကိစ်စဆိုပွီး ခရီးခဏခဏထှကျနေ တော့တာပဲ… သူအလုပျကွိုးစားလို့ ငှတှေအေမြားကွီးရတာကို မဇေငျမမှတျမောဘူး …
ဒါကိုလဲသူသိတယ်… ဟင်း..ဟင့်..ရွတ်..ဟင့်” ခံစားနေရသည်များကို ပြောရင်း မျက်ရည်များစီးကျလို့လာတော့တယ်..ပြောရင်နဲ့ မျက်ရည်များစီးကျလာပါတော့တယ်။ မေဇင့်မျက်ရည်တွေကို ကိုငြိမ်းလက်များဖြင့် ပါးပေါ်မှ သုတ်ချပေးလိုက်ရင်း….မေဇင်ကလဲ အလိုက်သင့်လေး ကိုငြိမ်းပုခုံးပေါ်ကို ခေါင်းလေးမှီထားလိုက်ပါတော့တယ်။ ကိုငြိမ်းပုခုံးပေါ်မေဇင် မှီလိုက်တော့ မေဇင့် ညဝတ်အင်္ကျီပါးပါး ရင်ဟိုက်လေးမှ မေဇင့်နို့လေးများကို ကိုငြိမ်းမြင်နေရသည်….မေဇင့် အသက်ရှူသံနှင့်အတူ နို့လေးများက ဖုတ်လှိုက်ဖုတ်လိုက်နဲ့ အရမ်းကို ချစ်စရာကောင်းပြီးကိုင်လို့ အရမ်းကောင်းမှာပဲလို့ ကိုငြိမ်းကြည့်ရင်းတွေးနေမိတာပေါ့…
ကိုငြိမ်းကို့ကိုယ်ပြန်ထိန်းပြီး သူအခုတွေးနေ ဖီလင်ယူနေတဲ့ အရာတွေကို ခေါင်းထဲကထုတ်ပြစ်လိုက် ချင်ခ့တဲ ယ်….. မိန်းမ ဆိုတ့အဲ ရာနဲ့နှစ်န့ချဲီလို့ ကင်းကွာနေတဲ့ ကိုငြိမ်းတစ်ယောက်တော့ ဒီလိုလှပပြီး ကာမပိုင်လင်ယောကျာ်းရှိတဲ့မိန်းမတယောက်ရဲ့ အထိအတွေ့ကို လွန်ဆန်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ ပထမ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိခင် သူလုံးဝ သိလိုက်တာ တခုကတော့ သူစပြီးစီးကျော်နေပြီဆိုတာကိုပေါ့…. ပြည့်စုံခြင်းအထွတ်အထိပ်ကို မရမက၊အမိအရ လှန်းယူလိုခြင်းဆန္ဒ အလွန်ပြင်းပျနေတဲ့ အိမ်ထောင်တည်မိန်းမ မေဇင်အဖို့တော့ ဘာကိုမှ ဆင်ခြေ ထိန်းကွပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါဘူး…
ဘယ်လောက် အားပြင်းတဲ့ အသိတရားပဲ ပြန်ဝင်လာပါစေ မေဇင်နောက်ဆုတ်တော့မှာ မဟုတ်ပါ….သူမ ထိုအရာကို ပြုလုပ်ဖို့ သေချာ စဉ်းစာပြီး ဖြစ်တော့ ရပ်တန့်ပြစ်ဖို့ ဆိုတာ မေဇင့် အတွက် ဒီအချိန်မျိုးမှာ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အဓိပါယ်မဲ့စကားတခွန်းဖြစ်သွားမှာပါ… သူမလက်လေးတွေကို ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး ခန္ဓာကိုယ်ချင်းထိကပ်လို့ နွေးထွေးမှုတွေပေးနေတဲ့ ကိုငြိမ်းရဲ့ အသက်ရှူသံ ရင်ခုန်သံတွေကနေ တဆင့် ကိုငြိမ်းစိတ်တွေအရမ်းလုပ်ရှားနေတယ် ဆိုတာကို မေဇင်လဲသိနေတယ်…။ မေဇင့် သွေးခုန်နှုန်းတွေ ပိုမြန်လာလို့ အသက်ရှူသံတွေဟာလဲ ပိုကြမ်းတမ်းလာနေတာကို ကိုငြိမ်းထိတွေ့ ခံစားနေရင်းက …
ခန်ဓာကိုယျပူးကပျထားလို့ တယောကျကိုတယောကျဘယျလောကျလိုအပျနကေတြယျဆိုတာကို ပိုပိုပွီးသိရှိလာသလို ခံစားနရေတဲ့ မဇေငျနဲ့ကိုငွိမျး………. သူတို့နှဈဦးဖွဈနပေုံက ဒိုငျနမိုကျတှေ အပွညျ့ထညျ့ထားတဲ့ ဂိုတောငျတဈလုံး ဖောကျခှဲဖွဈဖို့ ……တရှူးရှူးန့ေဲ လာငျကြှမျးရငျး ဂိုတောငျရှိရာကို သှားနတေဲ့ စနဈတံတခြောငျးလိုပေါ့… သာမနျုထကျ ပိုလနျှတဲ့ ရငျးနှီးမှုမြိုးကို ဆကျတိုကျဆိုသလို ခံစားထိတှေ့မိနကေတြော့ မဇေငျအတှကျ ရှေ့တလမျးဆကျတိုးဖို့ သတ်တိတှေ ပိုရှိလာအောငျ လုံ့ဆျောပေးလိုကျတလိုဖွဈသှားတော့တယျ…
ဒီလိုနဲ့ မေဇင်တယောက် ကိုငြိမ်းရ့လဲ က်တွေကို ကိုင်ထားရာက ဖြုတ်ချလိုက်ပြီး ဖောင်းပြီးအပေါ်ကို ထောင်တက်နေသော ဘောင်ဘီဂွကြားရှိ ကိုငြိမ်း၏ လိင်တံကြီးကို အလိုလို အပေါ်မှအုပ်ကိုင်ပြီးသား ဖြစ်နေတော့တယ်… ဘောင်းဘီအပေါ်မှ မမြင်ဖူးသေးသော ကိုငြိမ်း၏ သတ္တဝါလေးကို ဖြည်းဖြည်းညစ်လို့ ဆုပ်ကိုင်ကြည့်မိတယ်….ကိုငြိမ်းလဲ အသက်ပြင်းပြင်းတချက်ကို ဆွဲလို့ရှူပြီး မေဇင့်ကို ဖက်ထားလိုက်ပါပြီ… “မေ …ကိုအောင်မင်းက တကယ်ကို မေ့အပေါ်နားမလည် ခဲ့ဘူးနော်” ကိုငြိမ်းတယောက် ကွဲအက်အက် အသံတိုးလေး ဖြင့် မနဲ့ အားယူရင်း မေဇင်ကို ပြောတော့..
“ကြေးဇူးပွုပွီး ဘားမှမပွောပါန့ေဲ တာ့ ကိုငွိမျးရယျ….ကိုအောငျမငျးက နားမလဲပမေဲ့…ကိုငွိမျးကတော့ မေ ဘာတှေ ဖွဈနတောကို အစောကတ့ကဲ သိနတေယျ မဟုတလျား ဟငျ ကိုငွိမျး …ကိုငွိမျးလဲ မေ့ စီက ဘာတှလေိုခငျြနတေယျဆိုတာကို မအေရငျကတဲက သိပွီးသားပါ ကိုငွိမျးရယျ…ကိုအောငျမငျးရှေ့မှသာ မသငျ့တျောလို့ မေ မကျြလုံးတှကေို ရှောငျဖယျနပေမေဲ့ ….ကိုအောငျမငျး မေ တို့ အနားမရှိတဲ့ အခြိနျ မေ က ကလေးပေ့လှို့ ခြော့သိပျနတေဲ့အခြိနျတဆှေို မေ့ တကိုယျလုံးကို ကို ခိုးကွညျ့နတော သိပါတယျနျော…
အလဲိုခိုးကြည့်ပြီး မပြည့်စုံခ့ရဲ တဲ့နေ့တေကွုန်သွားပါပြီ ကိုငြိမ်းရယ်…မေ့ ရင်ထဲကနေ ကိုလိုသမျှကိုကြိုက်တလို ယူလိုက်ပါတော့နော်…အရာအားလုံးကို ယူလိုက်ပါတော့..နော်..ကိုငြိမ်း…” ချွဲပျစ် ချိုမြိန်သော စကားများကို မေဇင်ခတ်တိုးတိုးလေး ပြောနေရင်း ကိုငြိမ်း၏ လိင်တံကြီးကိုလဲ ဖြည်းဖြည်းချင်း အပေါ်အောက်ပွတ်သပ်လို့ ပေးနေမိတယ်….မေဇင် ယခုလုပ်နေသော အပြုအမူများသည် ကိုငြိမ်းအဖို့ လေပေါ်မှာပျံဝဲနေရသလိုပါပဲ မ သတ္တဝါနှင့် အတော်ကြာကင်းကွာနေခဲ့သော ကိုငြိမ်းတယောက် အရမ်းကောင်းလို့ မိန်းပြီး ယူနေတော့တယ်…
ပါစပျမလဲ ညညျးညူသံ တဲတဲထှကျလိျု့။ ကိုငွိမျးအဖို့ ဒီလိုခံစားမှုရသမြိုးကို တငျထှေးငယျ မရှိတော့သညျ့ နောကျပိုငျ တခါကလေးတောငျမြှ မခံစားခ့ရဲ တာကွာလို့နပေါပွီ…အခုတော့ကွညျ့ပါ အုံး …သူ့မိနျးမ ထှေးငယျရဲ့ သူငယျခငျြး အရငျးကွီးက ပွုစုလို့ ယုယပေးနလေိုကျတာ ပွောမပွတတျအောငျ ကောငျးလှနျးနတောပေါ့။ မဇေငျ့ နှုတျခမျးပါးလေးတှကေ ကိုငွိမျးလညျတိုငျတလြှောကျကို အနမျးနုနုလေးတှေေ ပးရငျးပေါ့….ကိုငွိမျးရ့ေဲ သှးခုနျနှုနျတှေ ပိုပိုမွနျလာပွီး ကိုခန်ဓာအတှငျးသှေးစီးစဉျးမှုမြားလဲ အလှနျအရှိနျပွငျးလို့လာတယျ …
ကိုငြိမ်းလည်တိုင်ကို မေဇင့် နှုတ်ခမ်းလေး များ လျှာဖြားလေးများဖြင့် ဖွဖွလေးနမ်းလိုက် ယှက်လိုက်လုပ်နေမိရင်း… ကိုငြိမ်းလည်ပင်းရှိ သွေးလွှတ်ကြေားဖောင်းဖောင်းလေးတချောင်းအတွင်း အရှိန်ဖြင့် ဖြတ်တန်းသွားသည့် သွေးစီးစဉ်းမှုကို မေဇင့် လျှာဖြားလေးမှ ထိတွေ့ခံစာလိုက်ရသည်…. မုတ်ဆိတ်ကျင်ဆွယ်တွေ မကြာသေးမီကမှ ရိတ်ထားသော မေးရိုးတလျှောက်နဲ့ မေးစေ့ တွေမှာ မေဇင်ရဲ့ တတွေး တေနွဲ့ ဖြန်းပတ်ထားသလိုပါပဲမေဇင့် ပေါင်ကြားအတွင်မှာလဲ ပူနွေးလို့လာပြီး စိုစိုစွတ်စွတ်လေးဖြစ်လို့ လာပါပြီး…
ကိုငြိမ်းတယောက် မေဇင့် အပြုအမူတွေကို သည်းမခံနိုင်တော့ပဲ မေဇင့်နှုတ်ခမ်းပါးလေးတွေကို ဆွဲယူကာ အားရပါးရကို အနမ်းမိုးတွေရွာပေးပါတော့တယ်။ အဲလို ကိုငြိမ်းကစလို့ မေဇင့်နှုတ်ခမ်းပါးလေးကို တေ့ပြီး kissing ဆွဲလိုက်ခြင်းဟာ ….သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကို ဗို့အားအလွန်ပြင်းတဲ့ ဓာတ်အလိုက်ခံလိုက်ရ သလိုပါပဲ…နှာသံတွေ အသက်ရှူသံတွေကလဲ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ဧည့်ခမ်းအကျယ်ကြီးထဲမှာ တိုးတိုးညင်သာစွာ ထွက်လို့နေပရောလား… ရုတ်တရက် ကိုငြိမ်း မေဇင့် ဂျိုင်းအောက်ကနေ မပြီး မတ်တက်ထရပ်လိုက်တယ်…မေဇင်က ဒီအပြုအမူကြောင့် ကိုငြိမ်းကို အံ့သြသလိုကြည့်နေမိတာပေါ့။
အတန်ကြာသေဆုံးခဲ့ရသော ရမ္မျမီးကြီးဟာ အခုတော့ ကိုငြိမ်းစိတ်အတွင်းဝဲ တဟုန်းဟုန်းဖြင့် သောက်လောင်နေတော့တယ်။ ဒီလို ရမ္မက်ငွေ့တွေ ရိုက်ခံထိသွားသော ကိုငြိမ်း၏အပြုအမူများ ပိုရ်ျရဲတင်းလို့လာပါတယ်။ မပြောမဆိုနှင့် မေဇင့် ပုခုံးနှစ်ဖက်ကို ကိုငြိမ်းဆုပ်ကိုင်ပြီး အုပ်နံရံဖက်ကိုတွန်းထုတ်လိုက်ပါရော…အုပ်နံရံမှ ကပ်လို့ ကြောင်ပြီးကြည့်နေတဲ့ မေဇင့်အနားကို မျက်တောင့်နီ လူမိုက်အထာဖြင့် တလမ်းချင်းရှောက်သွားပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို အုပ်နံရံမှာ မြှောက်လို့ဆွဲကပ်ထားလိုက်တာပေါ့်…မေဇင့် နှုတ်ခမ်းပါးလေးကို ကိုငြိမ်းနှုတ်ခမ်းဖြစ်တေ့ကာ အနမ်းတချက်ပေးလိုက်တယ်…
ဖွဖွလေးနမ်းလိုက်သော ကိုငြိမ်းအနမ်းကြောင့် မေဇင်ရင်ထဲမှာ ကြည်နူးမိနေယုံရှိသေး….ကို ငြိမ်း တယောက် သူ့လျှာကို စေ့နေတဲ့ မေဇင့်ပါစပ်ပေါက်ထဲ ထိုးထည့်ပြီး… တံတွေး နှင့် နှုတ်ခမ်းလျှာတို့ရဲ့ကြမ်းတမ်းစွာ ရောနောလုပ်ရှား ပွတ်သပ်နေရာမှ အသံများထွက်သည့်တိုင် ကစ်စင်ဆွဲပြစ်လိုက်ပါရော… ။ တယောက်လျှာ တယောက်ကလိလိုက် နှုတ်ခမ်းပါးလေးတွေကို သွားလေးတွေန့ဖဲ ဖွွေ လး ဆကွဲိုက်လိုက်နဲ့ နမ်းမိနေလို့ပေါ့…။ ညည်းသံတဲတဲလေးထွက်ကျလာတယ်….ကိုငြိမ်းကို တင်ကျပ်စွာ မေဇင်ဖက်ထားရင်း ဘော်လီမပါတဲ့ ညဝတ်အိင်္ကျီအောက်က သူမနို့တွေအပေါ် တအားဆွဲဖိထားလိုက်မိတယ်။
တရိတ်ရိတ်တက်လာတဲ့ ခံစားမှုဖီလင်တွေကြောင့် မေဇင့် နို့တီးခေါင်းလေးများမာတောင်လာပြီး ကိုငြိမ်း ရင်ဘတ်ကိုသွားထောက်လို့နေပါရော ….နိ့သီးခေါင်းအရသာကြောင့် ကိုငြိမ်းမေဇင့်ကို အနမ်းမိုးရွာတာရပ်ပြီး …မေဇင့်အပေါ်အင်္ကျီကြယ်သီးတွေကို တစ်လုံးပြီး တလုံးဖြုတ်နေလေရဲ့… ပြူထွက်လာတဲ့ မေဇင့်နို့အုံကို ကြည့်လို့ မေဇင့်မျက်နှာကိုလဲတချက်ပြန်ကြည့်လိုက်ရာ… ကိုကြိုက်သလိုလုပ်နိုင်ပါတယ်နော် လို့ အထာပေးတဲ့ အပြုံးကောက်လေး တခုကို မေဇင့်မျက်နှာကနေထွက်ကျလာတာပေါ့…။ ကိုငြိမ်းရ့လဲ က်တဖက်က မေဇင့် နို့တလုံးပေါ်အုပ်ကိုင်လို့ ခက်ဖွဖွညစ်ပေးရင်း ကျန်တလုံးကိုတော့ ပါစပ်နဲ့ ကုန်းစုပ်လိုက်တယ်…
“ အင်း…အင်….အားးးးး…..ကို……အင်း…အ..အင်” ဆိုတဲ့ ညည်းသံလေးတွေထွက်လို့လာယော မေဇင့်ပေါင်တွေ တဖြည်းဖြည်းကားသွားပြီး ကိုငြိမ်းရဲ့ လွတ်နေတဲ့ လက်တဖက်ကိုလှန်းယူကာ သူမပေါင်ကြားအတွင်း ဖိကပ်ပေးထားလိုက်ပါရော….ကိုငြိမ်းလက်က မေဇင့် ညဝတ်ဘောင်းဘီလေးကို ဆခွျွဲတ်ပြစ်ပြီး အမွေး အုပ်အုပ်နဲ့အရည်တွေစိုလို့နေတဲ့ မေဇင့် အဖုတ်လေးကို အုပ်ကိုင်ပြီးဖြည်းဖြည်းပွတ်ပေးနေတယ်… “ အင်း …အား….ကို…ကိုလို့….ကောင်းတယ်…..အင်း…အင်” မေဇင်ပါစပ် ဟဟလေးအတွင်းမှ ညည်းသံတွေအဆက်မပြတ်ထွက်လာရင်း…
ကိုငြိမ်းကလဲ ပွတ်ပေးနေတာကို အရှိန်တင်လို့ အမြန်ပွတ်လိုက် နို့စို့လိုက် နဲ့မေဇင့် ညည်းသံတွေအသက်ရှူသံတွေကလဲ တခန်းလုံးကိုပြည့်လို့….မေဇင်ကလဲ ကိုငြိမ်းလက်နဲ့ပတ်ွပေးနေတဲ့စည်းချက်အတိုင် သူမအဖုတ်လေးကို ကော့ကော့ပေးရင် အားကြိုးမွန္တက္ပါပဲ.. ”အား….အင်…အား…အားးးးးးးးးးးးးးးးးးး……” ဆိုပြီး အရုပ်ကြိုးပြတ် မေဇင်တခါပြီးသွားတာပေါ့။ ကိုငြိမ်းလက်တခုလုံး မေဇင့်အဖုတ်ရည်တွေနဲ့ ရွဲလို့ မေဇင် ပါစပ်မှ အက်သံလေးဖြင့် “ ကျေးဇူးပါပဲ ကိုရယ်…မေလေး လန်ွခ့တဲ့၂နှစ် ၃နှစ်အတွင်း ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ အရသာမျိုးမေဇင် မရခ့တဲာကြာပြီ…သိလာ…ကိုရယ်…ကို့ကိုအရမ်းချစ်တယ်ကွာ….”
“ ဒီနေ့တနေ့လုံး မေဇင့်အနားမှာ ကိုငြိမ်းနေပေးနိုင်မလား…ဟင်း..ကိုငြိမ်း…ကိုအောင်မင်းက မနက်ဖြန်မှ မန္တလေးက ပြန်ရောက်မှာ ဒီနေ့တနေ့လုံးရော တညလုံးပါ မေဇင်ကိုငြိမ်းကို ချစ်ပါရစေ..ကွာ” မေဇင့် အဖုတ်ကိုကိုင်ထားသော လက်ကို ကိုငြိမ်းပြန်ဆွဲ ယူလိုက်ပြီး …လက်တွင်ပေနေသော သုတ်ရည်နှင့် ချော်ဆီများရောနောနေသော မေဇင့်၏ အဖုတ်ရည်များကို လျှာနှင့်ယက်ရင်းက “အင်..ကိုဒီနေ့ မေဇင့်အိမ်မှာ အချိန်ကုန်ဖို့တော့ စိတ်မကူးထားဘူး…ဒါပေမဲ့ ကို မေဇင့်ကိုမငြင်းတော့ပါဘူး…
ကိုလဲ မေ့ကိုချစ်လို့မဝသေးဘူး…ဟဲဟဲ” လက်ချောင်များရှိ မေဇင်၏ သုတ်ရည်များကို ယက်နေရင်း စကားပြောနေသော ကိုငြိမ်း အမူအရာကို မေဇင် ကြည့်ရင်မှ ရင်ထဲတွင် တဏှာ မီးများပြန်လဲ လောက်ကျွမ်းလို့ လာပါတယ်။ မေဇင့်အဖို့ တခါပြီးသွားတာတောင် ၁မိနစ် မပြည့် သေးဘူး ထပ်ပြီးတောင်းနေတော့ တော်တော် နှာကြီးတဲ့မိန်းမလို့ ကိုငြိမ်းယူဆမိရင်ယူဆမိပါမယ်…ဒါမေမဲ့ သူမ ရဲ့ နှစ်န့ချဲည်လို့ ကြာအောင် ပြည့်စုံမှုမရှိတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ ဘားမှပြောစရာမရှိပါဘူး…တာဘယ်သူ့အပြစ်လဲ …လင်တော်မောင်များရဲ့ အပြစ်ပဲ မဟုတ်ဘူးလာ….
ဒါန့ကဲိုငြိမ်းလက်များကို လျှာဖြင့်ယက်နေရင်း မေဇင့် မျက်နှာကို တည်ကြည်သော မျက်လုံးများဖြင့် တည့်တည့်ကြည့်ရင်း… “ ကို တခုပြောချင်တယ် မေ…ဒီလိုပဲ ကိုအောင်မင်းက ဆက်ပြီးမေ့ကိုနားမလဲနိုင်သေးဘူးဆိုရင် ကိုမေ့နားမှာ အချိန်ပြည့် တာဝန်ယူပေးချင်တယ်ကွာ…နော်” ” ဒီလောက်ချောပြီး အရသာရှိတဲ့မိန်းမကို သူမို့လို့ ဂရုမစိုက်တယ်…”ကိုငြိမ်း မြေခွေးအပြုံးတချက်ပြုံးရင်း မေဇင့်အား ပြောရာ… “အို..ကိုငြိမ်းရယ် အဲဒီလူကြီးမေဇင်ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ဒီတသက်သိနိုင်တော့မယ်မထင်ဘူး… ခစ်..ခစ်..”ကိလေသ မာယာဖြင့် ဆွဲဆောင်မှုအားကောင်းပြီး
လမ်းဘေး အပြတ်မယ်တို့၏ ကျေနပ်အားရသော အပြုံးတပွင့်ကိုပြုံးရင်..မေဇင်တယောက် သူကိုသူသဘောကျလို့ တခစ်ခစ်နဲ့ရီနေတော့တယ်…ရီနေရင်းက “သူမေဇင့် ကို ကိုငြိမ်းအခုလို ဖြည့်ဆည်းပေးပုံမျိုးနဲ့ မေဇင်ကျေနပ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်မှ မေဇင့် အချစ်တွေသူ့အတွက်မရှိနိုင်တော့ ပါဘူး ကိုရယ်…မေဇင် ကို့ကိုအရမ်းချစ်နေမိပြီ..သိလား ကို” မေဇင် ၏ ချွဲပြစ်သော စကားများကို ကိုငြိမ်းနားထောင်နေရင်မှ မေဇင့်အဖုတ်အတွင်သို့ ပြန်နိုက်ကာ … အုံထနေသော အဖုတ်မွေးအုံအုံလေး အားဆွဲဆောင့်လိုက်သည်…
“အ….ကို ဘယ်လိုလုပ်တာလဲ နာလိုက်တာကွာ….” ဟုမေဇင်ပြောနေရင်းက “မေ ပဲပြီးသေးတာ ကိုငြိမ်းကပြီးသေးတာမဟုတ်ဘူး …ကို မေ့ ကိုလုပ်ချင်တယ်ကွာ” မေဇင်တစ်ယောက် ကိုငြိမ်းစကားမဆုံးသေး ကိုငြိမ်းအုပ်မိုးထားသော ရင်ခွင်ထဲမှ ပြေးထွက်လိုက်ရင် ဆိုဖာရှိရာ သို့ တလှမ်းချင်းရှောက်သွားရာ…မေဇင့် လမ်းလျှောက်ပုံကို ကိုငြိမ်းချေဆုံးခေါင်းဆုံး မျက်လုံးကျွတ်ထွက်မတက် လိုက့်ကြည့်နေလေရဲ့။ ခြေလှမ်းများကို တလမ်းချင်းလျှောက်လို့ ဆိုဖာရှိရာသို့ သွားနေသော မေဇင့်လမ်းလျှောက်ပုံမှာ ကိုငြိမ်းအဖို့ သွေးပျက်မတတ် ဆွဲဆောင်မှုရှိသောကြောင့်
ကိုငြိမ်းရင်ဘတ်ကြီးများမှာ တဒုတ်ဒုတ် တဒုတ်ဒုတ်နှင့် ….ရမ္မက်မီဖြင့် အပူပေးထားသော ကာမသွးများကလဲ ဆူပွတ်လို့နေတာပေါ့…ကိုငြိမ်းလဲ မျက်တောင်မခက်ပဲ မေဇင့်နောက်ကျောအလှကို ငေးမောမှင်သက်မိနေရင်း ..။ မေဇင်မှာ အနည်းငယ်ဝသယောင်ရှိပေမဲ့…သာမန် ယောကျာ်းသား တယောက်အဖို့ အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ကိုလုံးအချိုးအစား ရှိသူလေးပါ… ဆိုဖာနားကိုရောက်သွားတော့ မေဇင်တယောက် ခါပေါ်ရှိ ညဝတ်ဘောင်းဘီ မျော့ကြိုးလေးအတွင်းသို့ လက်ချောင်းလေးများထိုးချိတ်ကာ ဘောင်းဘီလေးကို
တဖြည်းဖြည်းအောက်သို့ဆွဲ ချွတ်လိုက်တော့တယ်… ဖြူဖွေးနုအိနေသော ဖင်လုံးလုံးလေးသည် ကိုငြိမ်းမျက်လုံးတွေကို ပြာဝေသွားအောင် လုပ်လိုက်သလို… ဘောင်းဘီးအား ချွတ်ပြီး ဆိုဖာရှိရာကိုလက်ထောက်လိုက်ကာ ဖင်ကြီးအား ကိုငြိမ်းဘက်သို့ လဲ့ပေးပြီး ကုန်းပေးထားတာကြောင့် ဖင်နှလုံးကြားမှ ဖုတ်မွေးများနှင့် ရောနေသော အဖုတ်ဖြူဖြူအတွင်းမှ အနီရောင်အတွင်း နှုတ်ခမ်းသားများ ပွင့်အာရ်ျလားတော့တယ် ကိုငြိမ်းလဲ မေဇင့် ဖင်ဖြူဖြူအနောက်သို့ ကပ်သွားပြီး ဘောင်းဘီအတွင်းမှ ထိုးထောင်ထွက်နေသည့် …
သူ၏လီးကြီးဖြင့် သွားထောက်ကာ စရ်ျ ညောင့်ပေးနေ၏ ။ လက်များကလဲ မေဇင့်အိင်္ကျီအောက်သို့လျှိုလို့ နို့သီးလုံးများအား အစုံလိုက်ဆွဲညစ်ကာ အနောက်မှတေ့ရင်း ပုံမှန်လေး ညောင့်ညောင့်လို့နေတော့ … မေဇင်ကလဲ သူ့ဖင်ကို ကိုငြိမ်းရဲ့ ညောင့်ချက်တွေ အတိုင်း ကော့ကော့လိုပေးနေလေရဲ့… အဲလို တယောက်ကိုတယောက် ကော့ရင်း ညောင့်ရင်းဖြင့် မေဇင် ကိုငြိမ်းဘက်သို့လဲ့ကာ ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်တော့တယ်… မျက်နှာရှေ့တည့်တည့်တွင် ထိုးထွက်နေသော ကိုငြိမ်းလီးကြီးကို လက်ကလေးနဲ့ တချိန်ထြဲပန်ပတ်ွပေးနေလေရ့…ဲ
ပတ်ွပေးရင်းက ကိုငြိမ်းဘောင်းဘီ ဇစ်ကိုဆွဲဖွင့်လိုက်ရာ သွေးကြောအမင်များဖြစ် အဖုဖု အထစ်ထစ် ညီညာပြန့်ပြူချင်းမရှိသော ကိုငြိမ်းလီးကြီးသည် မေဇင့် မျက်နှာရှေ့တွင် တရမ်းရမ်းဖြစ်မှာန်ဖီနေတော့တယ်…မေဇင့် ပါစပ်အနည်းငယ်ဟသွားပြီး ကိုငြိမ်းမျက်နှာလေးကို အံ့သြသော အမူအရာဖြင့်မော့ကြည့်ကာ “ ကိုရယ်…ကို့ပစ္စည်းကြီးက ကြီးလိုက်တာ ကိုအောင်မင်းပစ္စည်းနဲ့များ ရေနဲ့ဆီလိုကို ကွာတာပဲ…” ကိုငြိမ်းမေဇင့်ကို အပေါ်မှပြန်ပြုံးပြသည်… ကိုငြိမ်းကို ပါစပ်အဟောင်းသားလေးနဲ့ ကြည့်ပြီးပြောနေသော မေဇင့် ပါစပ်ဟဟလေးသည် …
ကိုငြိမ်းရ့လဲီးထိပ်ကို အနမ်းလေးတချက်ပေးလိုက်စဉ်… “အို…မေရယ် အဲလိုလုပ်ဖို့မလိုပါဘူးကွာ…ထပါနော်..” မေဇင်က ကိုငြိမ်းကိုပြန်မော့ကြည့်ရ်ျ “ကို…မေဇင့်ကိုချစ်ရင်…အလဲိုစကားမပြောန့ကွဲာ…”ဟုကိုငြိမ်းကို ပြန်ပြောရင် လီးကြီအားပါစပ်ပေါက် ကျင်းကျင်းကလေးထဲသို့ အတင်းထိုးထည့်ကာ ကိုငြိမ်းကို ပလွေပါတော့တယ်…. ကိုအောင်လဲ မေဇင့်ဆုပ်ချက် တွေအောက်မှာ မျက်ဖြူလေးဆိုက် ရင်း.. “အား….အား…မေ…အားး….ရှီးး…အား..ရှီး..ကောင်း…လိုက်…တာမေရယ်…အား” ကိုငြိမ်းကောင်းကင်ဘုံရောက်နေသလားမှတ်တယ်…
.မေဇင်ကလဲ အောက် ကနေ တ ..ပလတွ်..ပလတွ်..ပလပ်..ပလပ်နဲ့ ကြေးစား ဖာသည်လားအောင့်မေ့ရ အောင် ပလွေအတော်ထူးချွန်တဲ့ သူပဲ… မေဇင်တယောက် မှုတ်ရင်းဆုပ်ရင်းကနေ အပေါ်ကိုမော့ကြည့်တော့ ကိုငြိမ်းအရမ်းကို ဖီလင်တွေယူရင်း မေဇင်ကို ကြည့်နေတယ်…မေဇင်လဲ ကိုငြိမ်းကို ဖာပြုံးလေးတချက် ပြန်ပြုံးပြရင်းနှစ်ယောက်သား အရမ်းကို ကောင်းလို့ ကမ္ဘာကြီးကိုမေ့နေကျတာပေါ့…ကိုငြိမ်းအတွေးထဲမှာတော့ မေဇင်တယောက်ဒီလောက်ကောင်းအောင် ဘယ်လိုများတင်ယူထားသလဲပေါ့… ကိုအောင်မင်းနဲ့တော့မဖြစ်နိုင်။
တကယ်တော့ မေဇင် ယခုလို ပြုစုကျွမ်းကျင်နေခြင်းမှာ အိမ်မှာကိုအောင်မင်း ပန်းဆိုးတန်းက ဝယ်ဝယ်ပြီး ကြည့်ကြည့်နေကျ အပြာဇာတ်လမ်းများရဲ့ကျေးဇူးတွေလို့ ပြောရမယ်… “ အ..မေ…အား…မေဇင်…ကိုအရမ်းပြီးချင်နေပြီး…အ…အားးးးးးးးးးး” အနှစ်နှစ် အလလ စုထားသော ကိုငြိမ်းရဲ့သုတ်တွေ မေဇင့် ပါစပ်ထကဲို ရေပိုက်ခေါင်းဖွင့်ချလိုက် သလို တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ ပန်းထွက်ကုန်ပါရောလား… သုတ်ရည်တေနွှင့် ပြည့်နေတဲ့ မေဇင့်ပါစပ်ကြီး ဖောင်းကားလို့နေတော့တယ်… ကိုငြိမ်းလဲမေဇင့်ခေါင်းလေးကိုပွတ်လို့… “အွတ်..အင်းးးး.”
ပါစပ်ထဲက သုတ်ရည်အားလုံး မေဇင်တယောက်မျိုချလိုက်ပါပြီ… ကိုငြိမ်းမေဇင်ကို အံ့သြ နေတော့တာပေါ့…. “မေ..ဘာလို့ မျိုချလိုက်တာလဲ မရန်ွမရှာနဲ့ ကွာ” မေဇင် ကိုငြိမ်းကိုဘာမှပြန်ပြောနေတော့ဘူး သူ့လုပ်ရက်ကို အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်လို့ ပြုံးနေလေရဲ့… ကိုငြိမ်းမေဇင့်ခေါင်းကို အသာအယာလေးပွတ်ရင်း. “ဒီမနက်ကတော့ ဖြတ်တန်းခဲ့ဖူးတဲ့မနက်ခင်းတွေထဲမှာ ကျက်သရေအရှိဆုံးနဲ့ အရသာအရှိဆုံး မနက်လေးပဲမေ..” ဟု နှုတ်မှ ရေရွတ်ရင် မေဇင့် အပြုအစုပေါ် ကိုငြိမ်းတယောက် အကျေနပ်ကြီးကျေနပ်လို့နေတာပေါ့..
ဒူထောက်ထားသော မေဇင်တစ်ယောက် ပြန်ထရပ်ပြီး ကိုငြိမ်းကို မျက်နှာချင်းဆိုင်ရပ်ကာ “ဒါပေမဲ့ မေ့အတက်ွတော့ မဟုတ်သေးဘူး” လို့ပြောရင်း ကိုငြိမ်းအိင်္ကျီ ကြယ်သီးတွေကို တလုံးချင်း စဖြုတ်နေလေရ့…ဲ ကြယသ်ီးများဖြုတ်ပြီးသော ရှပ်အိကျီင်္ကို ချွတ်ရ်ျ စားပွဲပေါ်သို့ပြစ်တင်လိုက်ပြီး …ဒူဆစ်အထိ ကျွတ်ကျနေသော စတိုင်ပန်ကို ချေထောက်ဖြင့်ထိုးချွတ်ကာ ဘေးတနေရာသို့ ကန်ထုတ်လိုက်သည်။ ကိုငြိမ်လဲ မေဇင့်ကိုပြုံးကြည့်ရင်း “ဒီကောင်မလေးတော်တော် စိုး” လို့ပြောပြီး မေဇင့် ပါးလေးကို တချက်နမ်းလိုက်ပါတယ်
အိကျီင်္ဗ လာဖြစ်နေသော ကိုငြိမ်း၏ ရင်အုပ်များ ဗိုက်သားရှိ အရစ်လိုက်အရစ်လိုက်ဖြစ် မာတောင် ကျစ်လစ်ပြီး ယောကျာ်းပြီသသော ဘဲလ်လီသားများကို ကြည့်ကာ မေဇင်တယောက် သဘောခွေ့ နေလေရဲ။ ထိုက့သဲို ဘလ်ဲလီသားများ ရင်အုပ်ကားကားများအရင်ကမရှိ ကိုငြိမ်း၏ခန္ဓာကိုယ်မှာ အရင်ကဆို ခွေးပြစ်တ့တဲုတ်သာသာရယ်…။ နောက်ပိုင်အရက်ဖြတ်ပြီးတော့ ဂျင်မှာ အသဲအတန် တစ်နှစ်လောက် ကစားထားသဖြင့် အချိုးအစား အလွန်ကျနနေသည့် ဘော်ဒီ အလှကြီးကို မေဇင် သဘောကျလို့ နေနိုင္တာပါ။
မေဇင်လဲ သူမအိကျီင်္များကို စချွတ်နေရင်း…အတွေးတခုဝင်လာတယ်။ “အော်…ငါချွတ်လိုက်လို့ တုံးလုံးကြီးဖြစ်သွားရင် ကိုငြိမ်းရှေ့ ရှက်စရာကြီး “ ဟု ရမ္မက်ကြားက အရှက်တရားတွေ ရနေဆိုပဲ။ အိကျီင်္လေးကို ချွတ်လို့ စားပွဲပေါ်သို့ ပြစ်တင်လိုက်တယ်။ မေဇင် အနည်းငယ် စဉ်းစားရ်ျ စိတ်ထင့်နေသည်ကို ကိုငြိမ်းသတိထားမိလိုက်တော့ …မေဇင့် အနောက်သို့ သွားပြီး မေဇင့်၏ပုခုံးများပေါ်သို့ လက်ကိုတင်ချိတ်ထားလိုက်တယ်။ မေဇင်လဲ သူ့လက်များဖြင့် ကို ငြိမ်း၏ခေါင်းကို လက်ပြန်လှန်းကိုင်ကာ အလွန်ဆွဲဆောင်အားကောင်းသော ပိုစက်ရှင် တခုကို အတူတူ ပိုစ့် ပေးလျက်သားဖြစ်နေကျတာပေါ့။
ကိုငြိမ်းလက်များ မေဇင့်ပုခုံးပေါ်မှဖြည်းဖြည်းစင်းသွားပြီးနို့လုံးများနှားအရောက်တွင်တော့….လက်ချောင်လက်ထိပ်လေးများဖြင့် မေဇင့်နို့အုံ ဘေးခြမ်းများအား ဖွဖွကုတ်လို့ ပွတ်ဆွဲပေနေလေရဲ့…။ ဆက်ပြီး လက်များကို ဖြည်းဖြည်းလျှော့ချကာ မေဇင့် ခါးရှိ ညဝတ်ဘောင်းဘီ မျှော့ကြိုးများအတွင်းလက်နိုက်ကာ မေဇင့် ညဝတ် လေးကို အောက်သို့ ဆွဲချလိုက်တယ်။။ ကိုငြိမ်းလက်များ မေဇင့် ညဝတ်လေးကို အပေါ်မှ ညင်သာစွာ ဆွဲချနေရင်း…. သူ၏နှုတ်ခမ်းများဖြင့် မေဇင့် လည်တိုင်လေးမှစလို့ ကျောပျင် တင်ပစုံးအထိတိုင်အောင် ဖွဖွလေး နမ်းကာဆင်းသွားပြီး ဘောင်းဘီလေးကိုလဲ အောက်သို့ အဆုံးဆွချဲကာ ချွတ်ပြစ်လိုက်တယ်။
ဘောင်းဘီချွတ်ပြီး သူနမ်းခဲ့တဲ့ လမ်းကြောင်းအတိုင် နမ်းရင်းပြန်တက်သွာပြန်တယ်။ ကိုငြိမ်း၏ ပူနွေးသောတံတွေးရည်များအရသာကို မေဇင်ခံစားရင်း…. အိမ်နံရံအားလက်ဖြင့်ထောက်ကာ ကိုငြိမ်း၏နှုတ်ခမ်းများ ကျောပြင်အတွင်းသို့ ဆူးဝင်သွားမတတ် ခက်ကြမ်းကြမ်းနမ်းစေလိုသည်ကို အချက်ပြသောအနေဖြင့် ကိုငြိမ်း၏နှုတ်ခမ်းများကို သူမကျောပြင်နှင့်ပြန်ရ်ျတွန်းတွန်းပေးလို့နေတယ်။။။ တဆက်တည်း မေဇင့်လက်များက သူမနို့နှစ်လုံးကို အုပ်ကိုင်ထားသော ကိုငြိမ်းလက်ပေါ်သို့ ထပ်ရ်ျအုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး…
သူမနို့ကိုသူမ အားရစွာ ညစ်ချေနေလေရဲ့…။ မေဇင့် ကျောပြင်ကို ကိုငြိမ်း ပုဇွန်တုတ်ကွေး ပုံအနေအထားမျိုးဖြစ်နောက်မှသိုင်းဖက်ထားပြီး ….သူ့လိင်တံတဆာကြီးကိုလဲ မေဇင့် ဖင်နှလုံးကြားသို့ ထိုးထည့်ကာ ညောင့်ညောင့်လို့ ပေနေပါတော့တယ်။ ကိုငြိမ်း တစ်ယောက် မေဇင့် စအိုနဲ့အဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးတလျှောက် ပွတ်ဆွဲ ဆွဲရင်က ကိုငြိမ်းလိင်တံကြီးမှာ ပိုပိုပြီးတောင့်တင်းလာသည်ကို မေဇင့် သတိထားမိနေတယ်။ သူမလဲ အလိုက်သင့် ဖင်လုံးလုံးလေးကို ကိုငြိမ်းညောင့်နေသော စီးချက်အတိုင် ကော့ကော့ပေးရင်း
မကျြလုံးမြားကလဲမေးစငျးလို့ပေါ့။မဇေငျ့ တှငျးဝမှထှကျယိုကလြာသော ခြောဆီမြား ဖွငျ့ ကိုငွိမျးလီးကွီးမှာ စိုရှဲလို့နတောပေါ့… ဒါနဲ့ လီးထိပျ ဒဈလုံးကို အဖုတျအကှေဲ ကွာငျးတိုငျး ဖွညျးဖွညျး စရျြ ကိုငွိမျးခြော့တှငျးနစေဉျ… “ကို…အ..ဖွညျးဖွညျးထ့ေဲ နျာ …ကို့ ပစ်စညျးကွီးက မေ အခုလကျရှိသုံးနတေဲ့ …ကိုအောငျမွငျ့ ပစ်စညျးထကျ ၅ စ ၆ စ လောကျပိုကွီးတယျ…ခဈ..ခဈ…မဇေငျ လဲမလုပျရတာကွာပွီဆိုတော့လေ…ဖွညျးဖွညျးတှငျးနျော ကို “ ဟုဆို ကာ ကိုငွိမျးအား သမငျလညျပွနျကွညျ့ရငျးက ပွုံးပွီးပွောလိုကျသညျ။
ကိုငြိမ်း အသာအယာ ချော့လို့ တွင်းနေရာမှ ဖက်ကိုင်ထားသော သူ့လက်လေးများကို မေဇင့်နို့လုံးလေးများမှ လွှတ်ကာ နောက်အနည်းငယ်ဆုပ်ပြီး မေဇင့်နောက်ပိုင်အလှကို အကဲခက်နေလေရဲ့… “အင်…ဟုတ်ပြီ ဝိတ်လဲတော်တော်ကျ သွားပြီ…ဖင်လုံးလေးတွေကလဲ လခြမ်းလေးတွေကျနေတာ လှလိုက်တာ မေ ရယ်လို့ ကိုငြိမ်း စိတ်ထဲပြောနေမိသည်။ ကော့ထားတဲ့ မေဇင့် ဖင်နှစ်လုံးကြားမှ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားဖြူဖြူလေးများအတွင်းတွင် နီရဲရဲ အတွင်းသားလေးများ ပြူထွက်နေသည်…
ကိုငြိမ်းစိတ်တွေ လုံးဝထိန်းလို့မရတော့တဲ့ အဆုံး လီးကြီးအားလက်ဖြင့် ကိုင်ကာ မေဇင့် အဖုတ်ဝသို့ တေ့ပြီး ဖြည်းဖြည်းထပ်သွင်းပြန်ရာ မေဇင်လဲအလိုက်သင့်ပင် သူမဖင်ကို နောက်သို့ အနည်းငယ် ပြန်တွန်းပေး လိုက်၏ ယောကျာ်းရှိသော်လည် လိင်တံသေးငယ်တဲ့ယောကျာ်းကြောင့်လား …လိင်ဆက်ဆံမှု သိပ်မရှိလို့လားမသိ မေဇင့် အဖုတ်ဝသည် ကိုငြိမ်း၏ဒစ်ထိပ်လေးပင် ရှိသေးသည် အနည်းငယ်ကျပ်နေသဖြင့် ရှေ့ဆက်တွင်းရန် နဲနဲခက်လို့နေသည်…. ကိုငြိမ်းဒစ်ကိုပြန်ထုတ်ပြီး ထပ်တခါ ပြန်သွင်းကြည့်တယ်..သွင်းလိုက်တိုင်း မေဇင့် ပါစပ်မှ တ ..အင်း..အင်းနဲ့ နာကျင်လို့ အသံများထွက်ထွက်လာတယ်။….
နောက်ဆုံး ကိုငြိမ်းတယောက် မေဇင့် နာကျင်မှုကို မထောက်တော့ပဲ တဆုံးစောင့်သွင်းလိုက်ရာ… “ အားးးးးးးးးးးးး………………….ကို”ဟူသော မေဇင်၏ အော်သံသည် အိမ်ရှေ့လူသွားလမ်းကပင် ကြားနိုင်လောက်အောင်ပေါ်ထွက်လာတော့တယ်…. ကိုငြိမ်းလီးကို ရှေ့တိုးနောက်ငင် ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပေးနေတော့ပြီး….ကိုငြိမ်းရဲ့ လိင်တံကြီးကတော့ဖြင့် မေဇင့် အဖုတ်နုင့် တိုင်းလုပ်ထားသလားအောင့်မေ့ရအောင် အဖုတ်နဲ့ တုတ်နဲ့ က အလွန့်ကိုလိုက်ဖက်ညီတယ်… ပြောရရင် ကွန်ဒုံးထဲ ဘယ်လိင်တံ စွပ်စွပ်ချောင်မနေပဲ ကျပ်ကျပ်လေး ကွက်တိဖြစ်နေသလိုပေါ့….
မေဇင်တယောက် ဖင်ကိုကော့ကော့ပေးရင်း ကိုငြိမ်းလိင်တံကြီး အဖုတ်ထဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက် ဖြစ်နေတဲ့ အရသာကို မျက်လုံးလေး မိတ် ပါစပ်လေး ဟလို့ မိန့်မိန့်ကြီးခံစားနေပါရောလား….ဘယ်တုန်ကမှ မတွေ့ဖူးတဲ့ လိုးစောင့်ချက်တွေ က မေဇင့်အဖို့ ကောင်းကင်ဘုံပဲရောက်နေလာ…ကမ္ဘာပဲပျက်နေလားမသိ… ဧည့်ခမ်းတခုလုံးတော့ မေဇင့်ညည်းညူသံ “ အင်း….အင်း…..ရှီး.းးးးးးးး….အင်း….ကို………….ချစ်တယ်….အင်း…အား…ကိုရယ်..ကောင်းတယ်….အင်း….” အသံများနှင့်…” ဗလွတ် …ဗလွတ်..ပြွတ်ပြွတ်…”ဖြင့် အရည်များရွမ်းနေသော မေဇင့် အဖုတ်အပေါက်ဝလေးကို
ကိုငြိမ်း ငပြဲ့ကီး ဝင်တိုင်း ထွတ်တိုင်း ထွတ်ထွတ်လာတဲ့ ကာမဆက်ရက်သံ များဟာတအိမ်လုံး ညံစီလို့….. ကိုငြိမ်းပထမ မေဇင့်ကို ပုံမှန် အထုတ်အသွင်းလုပ်ရာမှ တဖြည်းဖြည်း အစွမ်းကုန်ကို အားရပါးရဆောင့် လိုးတော့တယ်….မေဇင်လဲ လွှတ်လပ်စွာပဲ အော်ညည်းလိုက် …တိုးတိုးလေး ညည်းလိုက်ဖြင့်နှစ်ယောက်သား ပြည့်ဆုံးခြင်းရှိ ရာ ကာမပန်းတိုင်တို့ တက်ညီလက်ညီ ချီတက်လို့ပေါ့…။ ဒီအချိန် ကိုအောင်မင်းများပြန်လာလို့ကတော့ မတွေးရဲစရာ…. “ အားး………..အ…..အ..အားးးး….” ဟူသောသံဆွဲလေးဖြင့် မေဇင့် အခေါင်းထဲတွင်မေဇင် ရေကန်ဖောက်ချလိုက်လေပြီး…
ကိုငြိမ်းတော့မပြီးသေး ကိုငြိမ်းလဲ အလွန်ပြီးချင်နေပြီ… “ဗကွ်..ဗကွ်…ဗကွ်..ဗကွ်…ဗကွ်“နဲ့ အရှိန်ကုန် မေဇင့်အားခါးမှ ကိုင်ကာ စောင့်ချက်ပြင်းပြင်းဖြစ် လိုးရင်းလိုးရင်း……”မေ…မေ..မေ…..အားးးး…အ…အ…..” ဆိုသော အက်သံရှရှလေးဖြစ် မေဇင့် အဖုတ်ထဲသို့ သုတ်ရည်များ ဒလဟော ပန်းထုတ်လိုက်ပါရော …မေဇင်တယောက် မှီထားသောနံရံမှလွတ်ကာ ကိုငြိမ်း၏မထုတ်ရသေးသော လီးတန်းလန်းဖြစ် ဆိုဖာပေါ်သို့မှောက်ရက်လေး ပြစ်လဲလိုက်သည်…ကိုငြိမ်းလဲ လီးတန်းလှန်းဖြစ် မေဇင့် အနောက်မှ တက်ရ်ျ မှောက်နေလိုက်တော့တယ်
ချစ်သူနှစ်ဦး အစင်ပြေစွာပဲ တချိန်က အလွန်ရောက်လိုခဲ့သော ကာမပန်းတိုင်ကို အတူတူပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ရောက်ရှိလို့ သွားပါတယ်….ကိုငြိမ်းကတော့ မှောက်လျက်အနေအထားနဲ့ မေဇင့် ကျောပြင်တွေ လည်တိုင်လေးတွေ ဂုတ်သားလေးတွေကို ဖွဖွလေးလိုက်နမ်းလို့ နေတယ်…မေဇင်ကလဲ လက်နောက်ပြန်ပြီး ကိုငြိမ်းဆံပင်တွေကြားထဲ လက်ချောင်းလေးတွေထိုးထည့်ကာ ဆံပင်တွေကိုတယုတယ ပွတ်ပေးလို့ နေလေရဲ့ .. “ ကို …ကို့ကိုတော့ မေဇင်အရမ်းချစ်သွားပြီကွား …မေဇင့်ကို တသက်လုံး…ဒီလိုပဲချစ်ပေးပါလားကို…နော်” “မေ ရယ် ကိုအောင်မင်းသိတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ…”
“ဘာဖြစ်လဲ …သိတော့ သူ့ကို ကွဲပြီး ကို့ကိုယူလိုက်မှာပေါ့…” နတ်ဆိုး တကောင်၏ကျေနပ်နေသော အပြုံးလေးဖြင့် ကိုငြိမ်းအားပြောစဉ် တဖက် အိပ်ခန်းအတွင်းမှ ကစ်ကစ်လေး တဝါးဝါး နဲ့ ငိုချလိုက်သောအသံ ထွက်ပေါ်လာတော့သည်။